Sandboxie: Launching Windows Ngwa dị ka Open Source | Site na Linux
Eprel a, Sandboxie, ngwa a maara nke ọma eji Sistemụ nrụọrụ Windows a tọhapụrụ n'okpuru usoro nke Meghee Isi mmalite site na ụlọ ọrụ mmezi gị "Sophos", mgbe afọ 15 gasịrị, mgbe e kere ya.
Sandboxie ọ bụ ihu ọma a free ngwá ọrụ, (na-emeghe ugbu a), nke na-enye gị ohere ịmepụta a gburugburu ebe obibi n'ime Windows. N'ụzọ dị otú a, inwe ike ịwụnye ma gbaa ọsọ ngwanrọ nke nwere ike ịdị ize ndụ ma ọ bụ nwee ike ịnwe ngwanrò ọjọọ (malware) na ndi fọduru nke Usoro njikwa. Kedu ihe na-enye ụzọ iji wepu usoro, omume ma ọ bụ ngwa, na-etinyeghị ya nkwụsi ike, nchekwa na nzuzo nke Sistemụ nrụọrụ yana ndị ọrụ ya.
N'ihe banyere Sistemụ arụmọrụ Windows 10, nke nwere ngwa Windows Sandbox, karịsịa maka mmelite, Sandboxie bụ ihe magburu onwe na ọtọ ọzọ, mfe iji, karịsịa na ubi nke nche, ebe Windows Sandbox ọtụtụ ghọtara dị ka a nsogbu ma obu enweghi ezigbo nsogbu nke obodo.
Otú ọ dị, SandboxieỌ bụ SandBox (Sandbox ma ọ bụ ule) dakọtara na nsụgharị niile nke Windowssite na Windows 7, nke na-enye gị ohere ịme faịlụ na mmemme na nchekwa zuru oke.
1 Kedu ihe bụ Sandbox?
2 Sandboxie: Ugbu a Mepee Isi Iyi
Kedu ihe bụ Sandbox?
Maka ndị na-enweghị nghọta, ọ dị mma ịkọwapụta na a sandbox enwere ike ịkọwa dị ka: A gburugburu ebe nchekwa nọọrọ onwe ya na sistemụ arụmọrụ ebe ndị mmepe ma ọ bụ ndị ọrụ dị elu ma ọ bụ ndị ọrụ nwere ike ịme ule dị iche iche ma ọ bụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. N'ụzọ dị otu a, na ihe arụnyere, gbuo ma ọ bụ hazie ya, ọ bụ ezie na ọ dị egwu, anaghị emebi iwu nchedo otu.
N'ihi ya, a sandbox Ọ bara uru ịme ule na nnwale nke ụdị dị iche iche, dị ka ịme mmemme nke na-aga n'ihu mmepe ma ọ bụ nyocha, ma ọ bụ ịme mgbanwe dị iche iche na-enweghị emetụta ya. Nọrọ sistemụ nrụọrụ, n'etiti ọtụtụ ohere ndị ọzọ.
Sandboxie: Ugbu a Mepee Isi Iyi
Dị ka ukara website nke ngwa, a tọhapụrụ ngwa ahụ Meghee Isi mmalite site na ọnwa nke Eprel 2020, site na nkwupụta ndị a:
"Ozi dị mkpa banyere mmalite nke SANDBOXIE Meghee koodu
Sophos nwere obi uto ịkpọsa ntọhapụ nke koodu Sandboxie na obodo, nke pụtara na anyị mechara bụrụ ngwa ọrụ emeghe!
Obi dị anyị ụtọ inye obodo ahụ koodu ahụ. E wuru Sandboxie ngwa ọrụ ọtụtụ afọ site n'aka ndị mmepe nwere ọgụgụ isi ma bụrụkwa ihe atụ nke otu esi ejikọ Windows na ọkwa dị ala. Obi dị anyị ụtọ ịhapụ ya obodo a na-atụ anya na ọ ga-ebute echiche ọhụrụ na iji okwu.
Ka anyị na-enyocha ma na-edebe gị ka ị nwee ike ịnabata koodu isi yana mgbanwe ya iji bụrụ ezigbo ọrụ mmeghe, anyị nwere ike iche na ị nwere ajụjụ ụfọdụ gbasara nnweta nke nsụgharị Sandboxie na ọdịnihu nke nzukọ na saịtị a. Weebụ".
Ọzọkwa, na- Weebụsaịtị gọọmentị nke nzukọ Sophos M na-akọ mgbanwe a, nke a pụrụ ịhụ site na ndị a njikọ. Na ibudata ma nwalee ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịnweta ihe ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Sandboxie», nke bụ proprietary na mechiri emechi nke Sistemụ nrụọrụ Windows, ma kwagala ugbu a na «Código Abierto», na onye ọrụ ya ma ọ bụ ọrụ ya bụ imezu ngwa ọ bụla n'ime a nchekwa ma dịpụrụ adịpụ; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Sandboxie: Launching Windows ngwa dị ka Open Source
Mepụta ebe nchekwa n'ime Windows ... ma ruo ugbu a enwere m ike ịgụ.
Zaghachi Diego Regero
Aghọtara m ihe onye na-ahụ maka karama mmanya?
M na-ekwu, m ga-enwe ike ịgba ọsọ ngwa ochie na igwe ọhụrụ?
Ndi directx ọ ga-enwe ike ịgba ọsọ? Mee zuru ezu na-abụghị mebere eji usoro ihe onwunwe?
Achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ na ọ dịpụrụ adịpụ, ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla, ọ naghị agbasa ndị ọzọ.
Emeghị ya na ọ na-enye ohere ngwa ngwa na-anaghị agba ọsọ n'ime sistemụ arụmọrụ, ya bụ, ọ bụrụ na ọ naghị agba ọsọ na Windows 7 n'ihi na ọ meela ochie, ọ gaghị agba na Sandboxie. Agbanyeghị, na weebụsaịtị ha, ha na-ekwu ihe ndị a:
Kedu ụdị mmemme m nwere ike iji Sandboxie gbaa ọsọ?
Ọ kwesịrị inwe ike ịgba ọsọ ọtụtụ ngwa sandbox.
Isi ihe nchọgharị weebụ (Microsoft Edge anaghị akwado n'oge a)
Ozi na ndị na-agụ akụkọ
Ndị ozi ozugbo na ndị ahịa na-akparịta ụka
Netwọk ndị ọgbọ
Office Suites (Libre Office, OpenOffice) (MS Office 2016 / Office365 nkwado a na-enye maka ụdị a kwụrụ ụgwọ)
Ọtụtụ egwuregwu, ọkachasị egwuregwu intaneti nke na-ebudata koodu ngwanrọ.
N'okwu niile na ndepụta a, ihe omume ndị ahịa gị na-ekpughere koodu sọftụwia dịpụrụ adịpụ, nke nwere ike iji mmemme ahụ dị ka ọwa iji tinye usoro gị. Site na mmemme sandboxed, ị na-emewanye njikwa gị na ọwa ahụ.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịwụnye ụfọdụ ngwa na sandbox.
Ugboko 1 dijo
Ọ nwere ihu ọma na-egbochi mgbanwe nke mmemme ị na-agba site na ịchekwa ya kpamkpam.
Ọ masịrị m karịa "Windows Sandbox" n'ihi na ọ dị nfe karịa, ọ bụ mmemme dị mfe.
Ọ na-achọ na-adịgide adịgide egbu nke a ọkwọ ụgbọala, na mgbe ahụ executable oge ọ bụla ị chọrọ iji na-agba ọsọ a omume na sandbox.
Ọ na-emepụta folda nwere ụdị nchekwa folda SS, ebe ọ na-edekọ mgbanwe nke mmemme ahụ.
Daalụ, Fernando! Daalụ maka ikwu okwu gị na inye onyinye nghọta.
ROSA Image Onye edemede: Onye njikwa dị mfe maka ihe oyiyi ISO na-ere ọkụ na USB